Fikradani waxay muujinaysaa iPhone 13 oo leh darajo yar iyo kamarad fiican | Wararka IPhone
ka xanta iyo daadinta ku saabsan iPhone 13 waxay bilaabayaan inay sameeyaan bogagga hore ee warbaahinta. Sannad kasta, markaan ku soo dhowaanno bisha Sebtembar, xogta, xanta iyo fikradaha suurtagalka ah ee waxa jiilka xiga ee iPhone noqon kara ayaa la bilaabayaa in la daabaco. Munaasabadan a fikradda cusub ee iPhone 13 kaas oo ka kooban laba dhinac oo in muddo ah la hadal hayay. Waxay u egtahay hoos u dhigidda darajada sare iyo hagaajinta kaamirooyinka ayaa sidoo kale la saadaalinayaa heer farsamo iyo naqshad.
IPhone 13 fikradaha ayaa bilaabmaya: tirinta ilaa Sebtembar
Ku salaam darajada ugu yar, kamaradda cusub ee kuu oggolaan doonta inaad sawirro wanaagsan qaaddo. Batariga MagSafe inuu socdo, oo leh 1460 mAh. Intaa waxaa dheer, batteriga weyn wuxuu sii dheeraanayaa ilaa 1,5 jeer.
Fikraddan cusub ee uu daabacay isticmaalaha caanka ah ee ConceptsiPhone wuxuu muujinayaa iPhone 13 oo leh midab oranji cusub oo koronto ah. Xaqiiqdii, fiidiyowga oo dhan waxaan ku arki karnaa sheeko cusub: baytariyada MagSafe oo midab leh. Adeegsaduhu wuxuu saadaaliyay in Apple ay bixin karto baytariyadaan, oo la sii daayay toddobaad ka hor, oo leh qaab midabkiisu yahay iPhone 13 inta soo hadhayna caddaan halkii ay ka ahaan lahaayeen dhammaan jirka cad maadaama hadda la suuqgeeyay.
Heer ku habboon, fikradda iPhone 13 waxay aad ugu eg tahay iPhone 12. Marka laga reebo hal u gaar ah: kamaradaha. Waa inaan xusuusannaa inaan wajahayno tusaalaha oo kaliya kor u qaada xagal ballaadhan iyo xagal aad u ballaaran oo, hadda, kamaradahaasi waxay ku yaalliin meel toosan xagga dambe. Si kastaba ha ahaatee, xiriirkan waxaan aragnaa sida labada kamaradood waxay noqon doonaan kuwo si dadban u jeeda, isaga oo tooshka uga tegaya afar geeslaha midigta sare iyo makarafoonka bidixda hoose.
Ugu dambayntii, waaya -aragnimada kale ee weyn ee aynu qaddarinaynaa waa hoos u dhigista darajada shaashadda ee dhinaca sare. Xusuusnow in qiimayntan ama sumcaddani ay tahay mid kakan ID ID oo soo bandhigaysa dhammaan kamaradaha iyo dareemayaasha mas'uul ka ah bixinta xogta si loo furo aaladda. Apple waxaa laga yaabaa inay awood u yeelatay inay hoos u dhigto oo ku dhejiso dareemayaashaas meel yar, u oggolaanaya in xoogaa weyneynta shaashadda, dammaanad qaadaya in meel bannaan oo dheeri ah laga helo baraha xaaladda macruufka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Fikradani waxay muujineysaa iPhone 13 oo leh darajo hoose iyo kamarad ka fiican